Marvel ရဲ့ “ The Eternals ” ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ Angelina Jolie – SoShwe
Home/Entertainment/Marvel ရဲ့ “ The Eternals ” ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ Angelina Jolie
Mandatory Credit: Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP/REX/Shutterstock (9421227ar) Angelina Jolie poses for photographers upon arrival at the BAFTA Film Awards, in London Britain BAFTA Awards 2018 Arrivals - 18 Feb 2018
Marvel ရဲ့ “ The Eternals ” ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ Angelina Jolie
admin March 29, 2019	Entertainment Leaveacomment
Jolie တစ်ယောက်အနေနဲ့ Marvel ရုပ်ရှင်လောကထဲသို့ ဝင်ရောက်မယ့်အခြေအနေမျိုးမှာ ရှိနေပါတယ်။
EW သတင်းဌာနသို့ပြောပြချက်အရ Maleficient မင်းသမီးကြီး Jolie တစ်ယောက်ဟာ Marvel Studio မှာ မကြာခင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မယ့် “ The Eternals ” ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီး သိရှိရပါတယ်။
Marvel ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရဆိုရင် The Celestials လို့ခေါ်တဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာ ထာဝရတည်မြဲနေတဲ့ အစွမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး The Celestial ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ? ? ?
Guardians of the Galaxy ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ မိုင်းတွင်းထဲက အကောင်ကြီးကြီးဆိုတာ The Celestial ပဲဖြစ်ပါတယ်။
The Eternals တွေဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ရသူများဖြစ်ပြီး The Celestial ရဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ Deviant လို့ခေါ်တဲ့ သက်ရှိတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရာကနေ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
Jolie ရဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့်အခန်းနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ Marvel Studio မှ တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်းမျိုး မရှိသေးပါဘူး။ Jolie အနေနဲ့ အခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ မင်းသမီးကြီး Frances Mcdorman ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Nomadland ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးနေပါတယ်။
Previous ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် ဂျက်စတင်ဘီဘာ။
Next Arya Stark အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Maisie Williams ရဲ့ Game of Thrones ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အလွဲအချော်များ။